“ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပူဇော် ကန်တော့ ၀န်ချတောင်းပန်နည်း ”
ဗေဒင် မှာ ကံညံ့နေတာကို ယတြာခြေလည်း မကောင်းတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ လူတွေက တကယ်တော့ ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ကို ပစ်မှားမိတဲ့ သူတွေပါပဲ။
ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ကို ပစ်မှား မိတဲ့ သူတွေ ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကံဇာတာတွေကောင်းသော်ညားလည်း သူတို့ကံမကောင်းတတ်ကြပါဘူး ။
အဲလို လူမျိုးတွေ ကျတော့ ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ကို နေ့တိုင်း ဘုရားရှိခိုးပြီး
ကန်တော့ ရပါတယ်။ ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ ပါး ယတြာကို အနည်းဆုံး တစ်လ
အဲလို လုပ်မှာ သူ့တို့ ရဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ် ။
အဘမင်းသိင်္ခရဲ့ မရမ်းတလင်း အယူတော်မင်္ဂလာခြံကြီးမှာ အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်တိုင်း ပြုလုပ်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ရှိခိုးပူဇော် ကန်တော့ ၀န်ချ တောင်းပန်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ မိမိတို့အိမ်မှာပင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူဇော်ကန်တော့နိုင်ရန်ဆိုတဲ့ စေတနာအရင်းခံနဲ့ ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် ။
အပြစ်ရှိမှ ပူဇော်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး …။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို မြေဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သစ်သီး(၁၀)မျိူး ၊ရေဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သောက်တော်ရေ(၁၀)ခွက် ၊ မီးဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဖယောင်းတိုင် (၁၀) တိုင် ၊ လေဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ယပ်(၁၀)လက် ပူဇော်ကန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက် …. လောကီ ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသောအကျိုးကျေးဇူးများ ကုသိုလ်များရရှိစေနိုင်တဲ့ အလှူလည်းဖြစ်ပါတယ် …။
ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် …။ အမှားအယွင်းတစ်စုံတရာကြောင့် အခိုက်အညံ့ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိခဲ့ပါလျှင် မိတ်ဆွေတို့အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား အကျွန်ုပ်ကပင် တာဝန်ယူ ခေါင်းခံပေးလိုက်ပါတယ် …။
“ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးကိုပြစ်မှားမိလျှင် … ”
ရှေးလူကြီးတွေ ၊ ရှေးဆရာတွေက ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကို ကာယကံ၊၀ဇီကံ၊မနောကံ တစ်ပါးပါးသောကံဖြင့် ပြစ်မှားကျူးလွန်မိပါလျှင် “ အသက်မရှည်ဘူး … အသက်ရှည်လျှင်လည်း ဘုန်းမကြီးဘူး …” လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ် …။
အသက်မရှည်ဘူး ဆိုတာကတော့ သက်တမ်းစေ့မနေရဘူးဆိုတာပါပဲ …။အသက်ရှည်လျှင်လည်း ဘုန်းမကြီးဘူး ဆိုတာကတော့ …. ဘာပဲလုပ်လုပ်မအောင်မြင်ဘူး …။ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ၊ရောဂါဘယထူပြောစွာနဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်နေရတာကို ဆိုလိုတာပါ …။
ဒီဘ၀မှာ ပြစ်မှားကျူးလွန်ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုရင်တောင် … အတိတ်ဘ၀အဆက်ဆက်မှာ ကျူးလွန်ခဲ့နိုင်ပါတယ် …။အဲဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီအပြစ်တွေဟာ ဒီဘ၀အထိခံနေရမှာပါပဲ …။
(၁) ရောဂါဆန်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ် ။
(၂) စီးပွားကို ခက်ခဲ ဆင်းရဲ ပင်ပန်းစွာ ရှာရတတ်တယ်။
(၃) ခန္ဓာကိုယ် နာကျင် ကျိုးကန်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်တယ်။
(၄) ပွေး၊ ၀ဲ၊ ယားနာ အရေပြားရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်။
(၅) ဘေးရန် အန္တာရာယ် ကျရောက်တတ်တယ်။
(၆) မင်းဘေးမင်းဒဏ် သင့်တတ်တယ်။
(၇) အကဲ့ရဲ့ အစွပ်စွဲ ခံရတတ်တယ်။
(၈) ဇနီး၊ မယား သမီး သားနှင့် ရှင်ကွဲ၊ သေကွဲ ကွဲတတ်တယ်။
(၉) လွန်စွာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။
(၁၀) ဥစ္စာ ပစ္စည်းများ အရောင်းအ၀ယ် မဖြစ်၊ အလိမ်ခံရ၊ အခိုးခံရ၊ ဓားပြတိုက်ခံရ၊ မီးလောင်ခံရ စသည်ဖြင့် တနည်းနည်းဖြင့် ဆုံးရှူံးသွားတတ်ပါတယ် …။
စော်ကားပြစ်မှားပြီးမှ ရှိခိုးတောင်းပန်တာထက် …. နောက်နောင် မစော်ကား မပြစ်မှားမိအောင် သတိထားဂရုစိုက်ဖို့ လည်း အရေးကြီးပါတယ် … ။
“ လူချင်းတူသော်လည်း … ”
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လူပေါင်းများစွာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာ (၁၆)နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ …။ပညာချင်းလည်းတူတယ် ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းတူတယ် ၊ အပင်ပန်းအနစ်နာခံတာလည်းတူတယ် ၊အလုပ်အပေါ်စေတနာထားတာလည်းတူနေပါလျှက် …. လူတစ်ချို့ကျတော့ ကြိုးစားသလောက်အောင်မြင်နေတယ် … တစ်ချို့ကျတော့လည်း ကြိုးစားတာထက်တောင်ပိုပြီးအောင်မြင်တယ် …။
တစ်ချို့ကျတော့ ကြိုးစားသလောက် အရာမထင်ဘူး …။လုပ်သလောက်မအောင်မြင်ဘူး …။လုပ်လေ မြုပ်လေဖြစ်နေတယ် …။ယတြာချေလည်း မထိရောက်ဘူး …။
လူတစ်ချို့ကျတော့လည်း ရောဂါလည်းသိတယ် ။ဆေးလည်းရှိတယ်။ဆေးကုတဲ့ဆရာကောင်းလည်းရှိတယ် ။ရောဂါတွေက မပျောက်ကင်း မသက်သာဘူး ။ ကိုယ် နဲ့ရောဂါတူ ၊ ဆေးကုတာ တူတဲ့သူတွေက ပျောက်ကင်းကုန်ကြပြီ ။ ကိုယ်ပဲ ကျန်နေတာ ။
ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးမှာ ငြိ နေတာတွေပါ ။
အဲလိုလူမျိုးတွေဟာ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးကို သေချာကန်တော့ ၀န်ချ တောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ လုပ်ငန်းစီးပွား၊ရည်ရွယ်ချက်တွေ သိသိသာသာ အဆင်ပြေတိုးတက် လာကြတာကိုလည်း အများကြီး လက်တွေ့ကြုံရဖူးပါတယ် ….။ အဲလိုလူတွေဟာ ရုပ်တွေပါပြောင်းသွားပါတယ် …။ ( ညှင်းသိုးသိုး မှုန်ကုပ်ကုပ် ရုပ်တွေကနေ ကြည်ကြည်လင်လင် ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရုပ်အဖြစ် ပြောင်းသွားကြတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။အပျက်ရုပ်ကနေ အဖြစ်ရုပ်ကို ပြောင်းသွားတာပါ)
ကျနော်တို့ လောကီပညာမှာလည်း အဓိဌာန်၊ကျင့်စဉ်၊တက်စဉ် တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးကို ဦးစွာ ရှိခိုးကန်တော့ ၀န်ချတောင်းပန်ပြီးမှ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ် …။ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးကို စော်ကားပြစ်မှားထားတဲ့ အပြစ်တွေရှိနေရင် အဓိဌာန်၊ကျင့်စဉ်၊တက်စဉ်တွေဟာလည်း ထိရောက်အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်တော့ပါဘူး …။
“ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ဆိုတာ ….”
ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို အရပ်စကားနဲ့နားလေည်အောင် ပြောပြရမယ်ဆိုရင် …။
(၁) ဘုရားရှင် အပေါင်း (ဂေါတမဗုဒ္ဓအပါအ၀င် ယခင်ကပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသော ဘုရားရှင်အပေါင်း
(၃)ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်အပေါင်း (အာသဝေါကုန်ခမ်းပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ)
(၄)အဂ္ဂသာဝက (မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ လက်ယာတော်ရံ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ၊ လက်ဝဲတော်ရံ ရှင်မောဂ္ဂလာန်နှင့် တကွတပည့်သာဝကများ)
(၅)မာတာ ( ယခုဘ၀အပါအ၀င် ၊ ယခင်ဘ၀များမှာ တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော ၊ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသော မိခင်များအားလုံး )
(၆) ပီတု ( ယခုဘ၀အပါအ၀င် ၊ ယခင်ဘ၀များမှာ တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော ၊ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသော ဖခင်များအားလုံး )
(၇) အာစရိယ ဂုရု ( မိမိအား ယခုဘ၀ ၊ ယခင်ဘ၀ များတွင် ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဖူးသော သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာများအားလုံး )
(၈) သတ္တာ ( မိမိထက် အသက်အရွယ်၊ဘုန်းသမ္ဘာကြီးရင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ)
(၉) ဓမ္မဒေသကာ ( ယခင်ဘ၀ ၊ ယခုဘ၀များတွင် မိမိအား ကောင်းကျိုးညွှန်ပြပြီး တရားဟောပြော သွန်သင်ဆုံးမပေးခဲ့ဖူးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ )
(၁၀) ဒါယကာ ( ယခုဘ၀ ၊ယခင်ဘ၀များတွင် မိမိအား အစာရေစာ၊နေရာထိုင်ခင်း၊အ၀တ်အထည်၊ငွေကြေး စသည်ဖြင့် တစ်နည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဖူးသော ၊ အခက်အခဲဖြစ်စဉ် ကူညီခဲ့ဖူးသော ကျေးဇူးရှင်များ )
“ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးအား ပူဇော်ကန်တော့ဖို့ ပြင်ဆင်ပုံ ”
(၁) စားပွဲဝိုင်း တစ်ခုပေါ်တွင် အရွယ်တူ ကြွေပန်းကန်ပြား (၁၀) ချပ်တင်ပါ။ခလယ်တွင် (၁)ချပ် ။ ဘေးပတ်ပတ်လည်တွင် (၉) ချပ် ။ (ပုံတွင် ပြထားတဲ့အတိုင်း )
(၂) သစ်သီး(၁၀)မျိုးကို ခလယ်က ပန်ကန်ပြားထဲတွင် (၁၀)မျိုးစလုံးထည့်ပြီး ၊ ဘေးပတ်ပတ်လည်က ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်စီတွင် တစ်မျိုးစီထည့်ပါ။
(၃) ပန်းကန်တစ်ချပ်စီ၏ ဘေးတွင် သောက်တော်ရေ(၁)ခွက်စီချထားပါ။စုစုပေါင်း (၁၀)ခွက်။
(၄) ပန်းကန်တစ်ချပ်စီ၏ ဘေးတွင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်စီ စိုက်ပါ။ထွန်းညှိုပါ။စုစုပေါင်း (၁၀) တိုင်။
(၅) ပန်းကန်(၁)ချပ်စီ၏ ဘေးတွင် ယပ် (၁)ချောင်းစီကို ပုလင်း (သို့) ပန်းအိုးလေးများတွင်စိုက်ပြီးချပးထားပါ။ ( ပန်းအိုးတစ်အိုးထဲမှာ (၁၀) ချောင်းစလုံး စုပြီးလည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်)
ခလယ်က ပန်းကန်ပြားဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို ရွယ်စူးပြီးလှူဒါန်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ် …။ကျန်တဲ့ပန်းကန်တွေကတော့ ကျန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအတွက်ရွယ်စူးလှူဒါန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် …။
မည်သည့်နေ့၊မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။(၁၂)နာရီမကျော်ခင်တော့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါ။ဘုရားစင်ရှေ့မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် …။
“ စတင်ပူဇော်ကန်တော့ပုံ ”
(၁) ဘုရားကန်တော့ပါ။ ( မိမိကန်တော့တတ်သလို ကန်တော့ပါ)
(၂) မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွ ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မြေဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သစ်သီး(၁၀)မျိူး ၊ရေဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သောက်တော်ရေ(၁၀)ခွက် ၊ မီးဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဖယောင်းတိုင် (၁၀) တိုင် ၊ လေဓါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ယပ်(၁၀)လက် တို့ကို ကပ်လျူပူဇော်ပါ ။ ( မိမိစိတ်တိုင်းကျ ကပ်လှူပူဇော်နိုင်ပါတယ်)
(၃) မေတ္တာပို့ပါ။( မိမိကိုယ်ကို စပြီး ပို့ပါ။ပြီးလျှင် မိဘနှစ်ပါး၊ဆရာသခင်များ၊မိသားစုများ၊ဆွေများညာတကာများ၊မိတ်ဆွေများမှနေစတင်ပြီး စင်္ကြာဝဠာတိုက်တစ်သောင်းထိရောက်အောင် ပို့ပါ။
(၄) ယခင်ဘ၀ ၊ယခုဘ၀များတွင် ခင်ပွန်းကြီး(၁၀)ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ကာယကံ၊၀စီကံ၊မနောကံ တပါးပါးသောကံဖြင့် ပြစ်မှားကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များ လျော့ပါးစေဖို့ ၊ ကင်းစင်ပပျောက်စေဖို့ အတွက် အသံထွက်ပြီး ၀န်ချ ကန်တော့ တောင်းပန်ပါ။
မိမိစိတ်တိုင်းကျ ပူဇော်ကန်တော့ ၀န်ချတောင်းပန်နိုင်ပါတယ် ။ရင်ထဲမှာ ရှင်းသွားသည် ၊ ပေါ့သွားသည် ၊ ကျေနပ်သွားသည်အထိ တစ်ဝကြီး ပြုလုပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျနော်တို့ ပူဇော်ကန်တော့တဲ့ ကန်တော့နည်းအတိုင်းကန်တော့ချင်သပဆိုရင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ….။
“ ဗုဒ္ဓါစ …. မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင့်တကွ …. ယခင်ကပွင့်တော်မူခဲ့ပြီးသော ဘုရားရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်း ….။
ပစ္စေကဗုဒ္ဓါစ …. ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအပေါင်းတို့အား၎င်း ….။
ရဟန္တာ …. အာသဝေါကုန်ခမ်းပြီးသော ရဟန္တာအရှင်သူမြတ်တို့အား၎င်း ….။
အဂ္ဂသာဝက……မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ လက်ယာတော်ရံ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ၊ လက်ဝဲတော်ရံ ရှင်မောဂ္ဂလာန်နှင့် တပည့်သာဝကအပေါင်းတို့အား၎င်း ….။
မာတာ …. ယခုဘ၀ ၊ ယခင်ဘ၀များတွင် တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော ၊ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသော မိခင်များအားလုံးတို့အား၎င်း ….။
ပီတု …. ယခုဘ၀ ၊ ယခင်ဘ၀များတွင် တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော ၊ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသော ဖခင်များအားလုံးတို့အား၎င်း ….။
ဂုရု …. မိမိအား ယခုဘ၀ ၊ ယခင်ဘ၀များတွင် ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဖူးသော သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာများအားလုံးတို့အား၎င်း …။
သတ္တာ …. မိမိထက် အသက်အရွယ်၊ဘုန်းသမ္ဘာကြီးရင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား၎င်း ….။
ဓမ္မဒေသကာ ….. ယခင်ဘ၀ ၊ ယခုဘ၀များတွင် မိမိအား ကောင်းကျိုးညွှန်ပြပြီး တရားဟောပြော သွန်သင်ဆုံးမပေးခဲ့ဖူးသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား၎င်း …။
ဒါယကာ ….. ယခုဘ၀ ၊ယခင်ဘ၀များတွင် မိမိအား အစာရေစာ၊နေရာထိုင်ခင်း၊အ၀တ်အထည်၊ငွေကြေး စသည်ဖြင့် တစ်နည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဖူးသော ၊ အခက်အခဲဖြစ်စဉ် ကူညီခဲ့ဖူးသော ကျေးဇူးရှင်များအား၎င်း ….။
တပည့်တော် တပည့်တော်မတို့သည် …. ယခင်ဘ၀အဆက်ဆက်တွင်၎င်း …. ယခုဘ၀တွင်၎င်း …. ။
သိ၍သော်၎င်း ၊ မသိ၍သော်၎င်း ….။
ကာယကံ ….၀စီကံ ….မနောကံ …. တစ်ပါးပါးသောကံဖြင့် ပြစ်မှားမိသည်ရှိသော် …. ထိုအပြစ်တို့ကို ပျောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ …. ပထမ ….ဒုတိယ …တတိယ ….တစ်ကြိမ် ….နှစ်ကြိမ် ….သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ….ရှိခိုးပူဇော် ….ဖူးမျော်မာန်လျော့ …. ကန်တော့ပါ၏ …. ။ ၀န်ခံပါ၏ ….။ ၀န်ချပါ၏ …။ တောင်းပန်ပါ၏ ….။ ဘုရား …။
ဤကုသိုလ်ကံ စေတနာတို့ကြောင့် ဆိုးကျိုးပေးဆဲဖြစ်သော …. ဆိုးကျိုးပေးရန်ရှိသော အကုသိုလ်မှန်သမျှတို့သည်၎င်း … အခက်အခဲဒုက္ခအနှောက်အယှက်မှန်သမျှတို့သည်၎င်း ….. ရောဂါဝေဒနာမှန်သမျှ အနန္တတို့သည်၎င်း ….. ။
ပိန်းကြာဖက်တွင်ရေမတင် လျှောကျဘိသကဲ့သို့ ….. ကင်းစင်လွင့်ပျောက် မထိရောက်တော့ဘဲ
ကောင်းကျိုးအနန္တများသာ …..ဖြစ်ထွန်းရပါလို၏ …ဘုရား …..”
(ကျေနပ်သည်အထိ ၊ ရင်ထဲတွင် ပေါ့သွားရှင်းသွားသည်အထိ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မဆို ရှိခိုးဝန်ချတောင်းပန်နိုင်ပါတယ် )
(၅) “ ဆုတောင်းရန် ”
အင်မတန်ကြီးလေး မွန်မြတ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးပြီးကာစ ၊ မိမိ၏ရင်ထဲ ၊ နှလုံးသားထဲ ၊စိတ်ထဲတွင် ကုသိုလ်စိတ်များဖြင့် ထုံမွှမ်းလွှမ်းခြုံနေသောအချိန် ၊ အပြစ်တွေ လျော့ပါး ကင်းစင် ပပျောက်ကာစ ၊ ရင်ထဲတွင် ပေါ့ပါးကျေနပ် ရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်မှာ …မိမိအလိုရှိရာများ …မိမိဖြစ်ချင်တာများကို ဆုတောင်းမည်ဆိုပါက ….။ တခြားသောအချိန်တွေမှာ ဆုတောင်းတာထက်ပိုပြီး ဆုတောင်းပြည့်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် …။
ဒါကြောင့် မိမိအလိုရှိရာများကို အသံထွက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား တ၀ကြီး ဆုတောင်းရန်ဖြစ်ပါတယ် …..။
(၆) မိမိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို မိမိနဲ့ပက်သက်ဆင်နွယ်နေသူများ၊ဝေမာနိကများကို အမျှအတန်းပေးဝေရန်ဖြစ်ပါတယ် ။( မိမိ စိတ်တိုင်းကျ အမျှဝေနိုင်ပါတယ် )
(၇) လှူဒါန်းထားတဲ့ ပစ္စည်းများကို ပြန်စွန့်နိုင်ပါပြီ။၄င်းပစ္စည်းများကို အိမ်အပြင်သို့ထုတ်ကာ အခင်းခပ်သန့်သန့်ခင်းပြီး …. ရေမြေလေမီး တွင် ကျက်စားနေကြကုန်သော ဝေမာနိကသတ္တ၀ါများကို စွန့်ကျဲလျူဒါန်းပါ။ ၄င်းတို့ကလည်း ပြန်လည်ကူညီ စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ် …။ ( မိမိတို့၏ စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊လုပ်ငန်းဆောင်ရည်ရွယ်ချက်များတွင် အကူအညီကောင်းများ ၊ အထောက်အပံ့ကောင်းများရရှိစေနိုင်တဲ့ စွန့်ကျဲခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်)
(၈) အောင်ထူးဆန်း ၊ အောင်သံဟိန်း ဂါထာရွတ်ပြီး အောင်ပွဲခံရန်
“ အောင်သံဟိန်း ဂါထာတော်ကြီး ”
အောင်ထူးဆန်း ၊ မှန်းသိုက်ဝင်
ထင်ကျော်သောင်း ၊ ဆောင်းထီးဖြူ
လူထိပ်မိုး ၊ ဟိုးဟိုးကျော်
ကျော်ဝှန်းတက် ၊ ဘက်မရှောင်
ခေါင်ဘုန်းကြီး ၊ ထီးရွှေနန်း
ငါတို့ရှိရာ စီးပွားလာဟု …။
ငါတို့ရှိရာ ကြီးပွားလာဟု …။
ငါတို့ရှိရာ ပညာလာဟု …။
ငါတို့ရှိရာ အောင်မြင်ခြင်းလာဟု …။
တစ်ရာ့တစ်ပါး ၊ လူမျိုးခြားတို့
ကျော်ရန်နှိမ်နှင်း ၊ စောရန်ခွင်း၍
မငြင်းမဆန် ၊ မခံမ၀ံ့
တစ်စင်္ကြာဝဠာလုံး ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး ၊ တစ်ပြည်လုံး ၊တစ်မြို့လုံး ၊ တစ်ရွာလုံး ၊ တစ်မိသားစုလုံး ….လက်ရုံးတန်းကာ ….။
(လက်ရုံးဆန့်တန်းပြီး ရွတ်ရန် )
အောင်ပါစေသော် …(၃) ခါ
အောင်စေရတု (၃) ခါ
အောင်ဆုသြဘာ ၊ အောင်မင်္ဂလာဖြင့်
အောင်ခြာပေါ်ထွန်း ၊ အောင်ဘုန်းကျွန်းထက်
အောင်ပန္နက်ဖြင့် ၊ အောင်ပန်း ပန်ပြီး
အောင်ပါစေသော် (၃) ခါ
( ၄င်းသစ်သီးများကို ပြန်စွန့်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စားလို့ရသလို ၊ တခြားသူများအားလည်း ဝေကျွှေးနိုင်ပါတယ် ။ ဥပါဒ်၊အန္တရာယ်မရှိပါ)
(၉) ဤတွင် အဘမင်းသိင်္ခ၏ မရမ်းတလင်း အယူတော်မင်္ဂလာခြံတွင် အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်တိုင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေကျဖြစ်သော ခင်ပွန်းကြီး(၁၀) ပါး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ပူဇော်ကန်တော့ ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း အဆင့်ဆင့် ပြီးစီးအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ် …။
Credit: မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)